လကျရှိအရေးပျေါကာလ အပွောငျးအလဲမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ ရခိုငျ့ဦးဆောငျပါတီ၏ ထုတျပွနျကွငွောခကျြ – Arakan Front Party
February 6, 2021 July 7, 2021 office_hq_afp
လကျရှိအရေးပျေါကာလ အပွောငျးအလဲမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ ရခိုငျ့ဦးဆောငျပါတီ၏ ထုတျပွနျကွငွောခကျြ
[ Zawgyi font first / Unicode below / English text at the bottom ]
လက်ရှိအရေးပေါ်ကာလ အပြောင်းအလဲများနှင့်ပတ်သက်၍ ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ၏ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
၁။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ ခေတ်ဦးကာလကပင် ပြည်မနိုင်ငံရေးထဲတွင် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ ကဲ့သို့သော ရခိုင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးသမားများ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပါဝင်လာခဲ့သော်လည်း ရခိုင်တို့၏ နင်းပြားဘ၀ အခြေအနေမှာ မည်သည့်ဗဟိုအစိုးရပင်တက်တက် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ပြည်မ ဗဟိုအစိုးရအာဏာအတွက် အားပြိုင်ကြသည့် မည်သည့်ဘက်ခြမ်းပင်ဖြစ်စေ ရခိုင်အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား တို့၏ ရပိုင်ခွင့်တို့အား ချုပ်ချယ်ခဲ့ကြရာတွင် အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းကို လက်တွေ့သမိုင်းဖြစ်ရပ်များက သက်သေပြပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂။ ရခိုင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးအား အစဉ်တစိုက်ဆန့်ကျင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD)က နိုင်ငံရေးပါတီ (၄၈) ပါတီသို့ပေးပို့သည့် စာကို မိမိတို့ ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီလည်း လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ရခိုင်လူထုအားသစ္စာခံသော မိမိတို့ ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီသည် ရခိုင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးကို ဦးတည်တိုက်ပွဲဝင်နေသော နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်သည့်အလျောက် အဆိုပါ ပေးစာအား အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ NLDဦးဆောင်သည့်အစိုးရအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ခွင့်ရရှိရေး ရာထူး ရရှိရေးကိုသော်လည်းကောင်း NLDပါတီနှင့် ဆွေးနွေးခွင့်ရရှိရေးကိုသော်လည်းကောင်း ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်း လုံးဝမရှိခဲ့ပါ။
၃။ ထိုနည်းတူစွာ ယခုလက်ရှိ “နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ”၏ အစိုးရအဖွဲ့တွင်ပါဝင်ပေးရန် ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလည်း ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင်များ၏ ၀ိုင်းဝန်းသုံးသပ်ချက်အရ လက်မခံခဲ့ပါ။
၄။ ရခိုင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်သည် ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ၏ အန္တိမရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်ပါသည်။ နံပါတ်တစ် ဦးစားပေးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း များအား ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်နေစေမှသာလျှင် ငြိမ်းချမ်းသော လူ့ဘောင်ကို တည်ဆောက်နိုင်မည်ဟု မိမိတို့ ယုံကြည်ပါသည်။ ဒီမိုကရေစီစံတန်ဖိုးများအား အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ရန် ကြိုးစားကြရမည် ဟု ခံယူပါသည်။
၅။ NLD အစိုးရအာဏာရှိစဉ်ကာလတွင် ဒေါက်တာအေးမောင်အပေါ် မတရားချမှတ်ခဲ့သော ပြစ်ဒဏ် များအား လက်ရှိ “နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ”အစိုးရအနေဖြင့် လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုကာ လွှတ်ပေးနိုင်ရေး အတွက် ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီကိုယ်စား မိမိတို့ပါတီဒုတိယဥက္ကဌက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ထံသို့ စာရေးသား ပေးပို့ တောင်းဆိုထားပါသည်။ ဒေါက်တာအေးမောင်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အားလုံးအား ပြန်လွှတ်ပေးရေးမှာ ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ၏ အစဉ်တစိုက်တောင်းဆိုချက် ဖြစ်ပါသည်။
၆။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအပါအ၀င် ရခိုင့်အကျိုးစီးပွားရေးရာများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောဆိုစရာရှိသည် များကို မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်မဆို ပြောဆိုဆွေးနွေးဆက်ဆံသွားမည်ဖြစ်သော်လည်း လူတစ်ဦးချင်းအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိရေးကို ဦးတည်ပြီးအပေးအယူလုပ်ခြင်းတို့အား ရှောင်ကြည်လျက် ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ၏ အခြေခံမူတစ်ရပ်ဖြစ်သော “သန့်ရှင်းအားကောင်းသော ရခိုင်နိုင်ငံရေးရပ်ဝန်း” ဖြစ်ထွန်းလာရေးအတွက် ဦးတည်လျက် ရခိုင်လူထုအကျိုးစီးပွားအား ဦးထိပ်ပန်ဆင်ကာ ရခိုင့်အမျိုးသားရေး တာဝန်ကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာအပ်ပါသည်။
ရကျစှဲ – ၂၀၂၁-ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလ (၆) ရကျ
၁။ မွနျမာ့လှတျလပျရေးတိုကျပှဲ ခတျေဦးကာလကပငျ ပွညျမနိုငျငံရေးထဲတှငျ ဆရာတျောဦးဥတ်တမ ကဲ့သို့သော ရခိုငျအမြိုးသား နိုငျငံရေးသမားမြား ဦးဆောငျဦးရှကျပါဝငျလာခဲ့သျောလညျး ရခိုငျတို့၏ နငျးပွားဘဝ အခွအေနမှော မညျသညျ့ဗဟိုအစိုးရပငျတကျတကျ ပွောငျးလဲသှားခဲ့ခွငျးမရှိပါ။ ပွညျမ ဗဟိုအစိုးရအာဏာအတှကျ အားပွိုငျကွသညျ့ မညျသညျ့ဘကျခွမျးပငျဖွဈစေ ရခိုငျအပါအဝငျ တိုငျးရငျးသား တို့၏ ရပိုငျခှငျ့တို့အား ခြုပျခယျြခဲ့ကွရာတှငျ အတူတူပငျဖွဈကွောငျးကို လကျတှသေ့မိုငျးဖွဈရပျမြားက သကျသပွေပွီးဖွဈပါသညျ။
၂။ ရခိုငျ့ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့ရရှိရေးအား အစဉျတစိုကျဆနျ့ကငျြလုပျဆောငျခဲ့သညျ့ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ (NLD)က နိုငျငံရေးပါတီ (၄၈) ပါတီသို့ပေးပို့သညျ့ စာကို မိမိတို့ ရခိုငျ့ဦးဆောငျပါတီလညျး လကျခံရရှိခဲ့ပါသညျ။ သို့ရာတှငျ ရခိုငျလူထုအားသစ်စာခံသော မိမိတို့ ရခိုငျ့ဦးဆောငျပါတီသညျ ရခိုငျ့ ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့ရရှိရေးကို ဦးတညျတိုကျပှဲဝငျနသေော နိုငျငံရေးပါတီဖွဈသညျ့အလြောကျ အဆိုပါ ပေးစာအား အကွောငျးပွနျကွားခဲ့ခွငျးမရှိပါ။ NLDဦးဆောငျသညျ့အစိုးရအဖှဲ့တှငျ ပါဝငျခှငျ့ရရှိရေး ရာထူး ရရှိရေးကိုသျောလညျးကောငျး NLDပါတီနှငျ့ ဆှေးနှေးခှငျ့ရရှိရေးကိုသျောလညျးကောငျး ကွိုးပမျးခဲ့ခွငျး လုံးဝမရှိခဲ့ပါ။
၃။ ထိုနညျးတူစှာ ယခုလကျရှိ “နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီ”၏ အစိုးရအဖှဲ့တှငျပါဝငျပေးရနျ ကမျးလှမျးခကျြကိုလညျး ရခိုငျ့ဦးဆောငျပါတီခေါငျးဆောငျမြား၏ ၀ိုငျးဝနျးသုံးသပျခကျြအရ လကျမခံခဲ့ပါ။
၄။ ရခိုငျ့ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့သညျ ရခိုငျ့ဦးဆောငျပါတီ၏ အန်တိမရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျဖွဈပါသညျ။ နံပါတျတဈ ဦးစားပေးလညျး ဖွဈပါသညျ။ အခွားတဈဖကျတှငျလညျး ဒီမိုကရစေီစနဈဖွငျ့ လူ့အဖှဲ့အစညျး မြားအား ခြောမှစှေ့ာ လညျပတျနစေမှေသာလြှငျ ငွိမျးခမျြးသော လူ့ဘောငျကို တညျဆောကျနိုငျမညျဟု မိမိတို့ ယုံကွညျပါသညျ။ ဒီမိုကရစေီစံတနျဖိုးမြားအား အတတျနိုငျဆုံး ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျနိုငျရနျ ကွိုးစားကွရမညျ ဟု ခံယူပါသညျ။
၅။ NLD အစိုးရအာဏာရှိစဉျကာလတှငျ ဒေါကျတာအေးမောငျအပျေါ မတရားခမြှတျခဲ့သော ပွဈဒဏျ မြားအား လကျရှိ “နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီ”အစိုးရအနဖွေငျ့ လှတျငွိမျးခှငျ့ပွုကာ လှတျပေးနိုငျရေး အတှကျ ရခိုငျ့ဦးဆောငျပါတီကိုယျစား မိမိတို့ပါတီဒုတိယဥက်ကဌက ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျထံသို့ စာရေးသား ပေးပို့ တောငျးဆိုထားပါသညျ။ ဒေါကျတာအေးမောငျအပါအဝငျ နိုငျငံရေးအကဉျြးသားမြား အားလုံးအား ပွနျလှတျပေးရေးမှာ ရခိုငျ့ဦးဆောငျပါတီ၏ အစဉျတစိုကျတောငျးဆိုခကျြ ဖွဈပါသညျ။
၆။ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးအပါအဝငျ ရခိုငျ့အကြိုးစီးပှားရေးရာမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ ပွောဆိုစရာရှိသညျ မြားကို မညျသညျ့အဖှဲ့အစညျးနှငျ့မဆို ပွောဆိုဆှေးနှေးဆကျဆံသှားမညျဖွဈသျောလညျး လူတဈဦးခငျြးအကြိုးခံစားခှငျ့ရရှိရေး အဖှဲ့အစညျးတဈခု အကြိုးခံစားခှငျ့ရရှိရေးကို ဦးတညျပွီးအပေးအယူလုပျခွငျးတို့အား ရှောငျကွညျလကျြ ရခိုငျ့ဦးဆောငျပါတီ၏ အခွခေံမူတဈရပျဖွဈသော “သနျ့ရှငျးအားကောငျးသော ရခိုငျနိုငျငံရေးရပျဝနျး” ဖွဈထှနျးလာရေးအတှကျ ဦးတညျလကျြ ရခိုငျလူထုအကြိုးစီးပှားအား ဦးထိပျပနျဆငျကာ ရခိုငျ့အမြိုးသားရေး တာဝနျကို ဆကျလကျထမျးဆောငျ သှားမညျဖွဈကွောငျး ထုတျပွနျကွငွောအပျပါသညျ။
AFP’s Statement regarding the Current Emergency Situations
Date – 2021 February 6
(1) Even though Arakanese politicians, such as Venerable U Ottama, participated in leading roles of Myanmar politics since early stages of Myanmar’s independence struggle, downtrodden life of Arakanese people never changed, whichever central government took power. History has clearly seen that, whichever side ofastruggle for the central government power in Myanmar proper, they are always the same in their nature of oppressing the rights of non-Bamar-ethnic peoples, including the Arakanese.
(2) National League for Democracy (NLD), which has always opposed Arakanese self-determination, sentaletter to 48 political parties including the Arakan Front Party (AFP), and we received it well. But the Arakan Front Party, which has always been fighting for the Arakanese self-determination, did not reply that letter. And we the AFP did not seek to beapart of NLD-led Government and even did not make any attempts to have discussion with the NLD, which then was newly elected.
(3) Similarly, the AFP declined,aasaresult of the AFP’s leadership’s deliberation, the offer of the incumbent “the State Administration Council” government to beapart of their government.
(4) The Arakanese self-determination is the ultimate goal of the Arakan Front Party, and is our number one priority. On the other hand, we believe thatapeaceful society could be built only when the society is being operated by democratic means. We are all convinced that democratic values should be upheld as much as possible.
(5) Acting on behalf of the AFP, our vice chairperson has recently sentaletter to senior general Min Aung Hlaing urging him to release Dr Aye Maung, who was unjustly givenaprison sentence during the NLD’s rule. To release all political prisoners including Dr Aye Maung is one of our unswerving demands.
(6) Regarding internal peace issues and Arakanese interests, we will have necessary dialogues with any stakeholders. Shunning cutting deals for the sole purpose of seeking interests ofaperson oragroup of persons oramere organization, looking forward to creatinga“clean, strong and healthy Arakanese political environment”, and having the interests of the Arakanese people as our top priority, we the AFP will continually serve Arakanese national duties, we declare.
Previous ရခိုငျ့ဦးဆောငျပါတီ (AFP) ၏ မူဝါဒသဘောထားဆိုငျရာ အကဉျြးခြုပျရှငျးလငျးခကျြ
Next လှတျမွောကျလာသညျ့အတှကျ ကွိုဆိုဂုဏျပွုခွငျး